Xasan Sheekh: “Warkooda cid dhag qalaq u siineysa ma jirto” | KEYDMEDIA ONLINE
Xasan Sheekh: “Warkooda cid dhag qalaq u siineysa ma jirto”
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aan dhag jalaq loo sii doonin wararka ka soo baxaya Rajiimka Farmaajo ee ay dooayaan in ay ku carqaladeeyaan mudahaadka Jimcaha.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Xasan Sheekh oo la hadlayay dad shacab ah oo u badan dhalinyaro ku booqday guriga uu ka dagan yahaay Muqdisho ayaa sheegay in Midowga Musharixiinta aysan aqbali doonin isku-day kasta oo dowladda uu waqtigeedu dhamaday ay ku dooneyso in ay joojiso bannaan-baxa ay iclaamiyeen.
Xasan Sheekh wuxuu sheegay in aan kooxda Farmaajo wanaag looga baran, Isla-markaaana aysan sharciga iyo dastuurka dalka u yaalla dhowrin.
“Bannaan-baxa waa tageynaa, warkooda cid dhag qalaq u siineysa ma jirto, run laguma baran, wanaag laguma baran, ixtiraam laguma baran, Dowladnimada in ay dhowraan laguma baran, warkoodana cid yeeleysa maleh, lama dhageysanayo”. Ayuu yiri Xasan Sheekh.
Hoggaamiyaga Xisbiga Midawga Horu-marka iyo Nabadda Xasan Sheekh ayaa dhamaan bulshada ku dhaqan Gobolka Banaadir ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan bannaan-baxa maalinta Jimcaha ah ka dhaca Dal-jirka Dahsoon.
Xasan Sheekh wuxuu maalinta dibad-baxa ku tilmaamay mid noqon doonta taariikhi oo waqtiga soo aaddan laga sheekeyn doono sida maalmaha kale ee Soomaalidu ka sheekeyso, wuxuuna shacabka Muqdisho ku dhiira-galiyay in aysan maalintaas ka maqnaan fagaaraha.